अन्तिम सिटी फुकिसकेपछि युनाइटेडले पायो पेनाल्टी ! – Sourya Online
सौर्य अनलाइन २०७७ असोज ११ गते २१:२४ मा प्रकाशित
लण्डन । म्यान्चेस्टर युनाइटेडले प्रिमियर लिगको नयाँ सिजनमा पहिलो जीत हासिल गरेको छ, तर निकै विवादित परिस्थितमा । ब्राइटनबिरुद्ध ३–२ को संघर्षपूर्ण जीत निकाल्ने क्रममा युनाइटेडले रेफ्रीले खेलको अन्तिम सिटी फुकिसकेपछि पनि पेनाल्टी पायो । जसलाई गोलमा परिणत गर्दै युनाइटेड विजयी बन्यो । आखिर खेल सकिएपछि पनि युनाइटेडले किन पेनाल्टी पायो त ? रेफ्री क्रिस काभानाले खेलको अन्तिम सिटी फुक्न अघि नै ह्यान्ड बलको घटना भएको कारण नियमअनुसार भिडियो एसिस्टेन्ट रेफ्रीले जाँच गर्ने अवसर पायो । फलस्वरुप युनाइटेडले निर्धारित समयको खेल सकिएपछि पनि पेनाल्टी पाएको हो ।
खेलको ९८ औँ मिनेटमा खेल सकिन केही क्षण अघि मात्र ह्यारी म्याग्वायरको हेडमार्फत गरेको प्रहार निल माउपेको हातमा लागेको थियो जसलाई सोली मार्चले लाइनबाट क्लियर गरेका थिए । नियमका अनुसार रेफ्रीले खेल सकिएको संकेत गरे पनि भीएआरको जाँचपछि खेल पुनः सुरु गर्न पाइन्छ । ईन्टरनेशनल फुटबल एशोसिएसन बोर्ड (आईएफएबी) का अनुसार खेलमा भएको घटनाको मूल्यांकन गर्न समयको पाबन्दी छैन ।
रोमाञ्चक बनेको खेलमा माउपेले हाफ टाइमको ठीक अघि पेनाल्टीमार्फत ब्राइटनलाई अग्रता दिलाएका थिए । योसँगै डेभिड डि गेयाले पेनाल्टी रोक्न नसकेको लगातार १९ औँ पटक हो । तर, लेविस डंकले आत्मघाती गोल गरेपछि खेल बराबरी भयो । मार्कस रासफोर्डले गोल गर्दै खेलमा युनाइटेडलाई अग्रता दिलाए । तर, खेलको इन्जुरी समयको ९५ औँ मिनेटमा गोल गर्दै मार्चले खेल २–२ को बराबरीमा ल्याए । त्यसपछि भएको ह्यान्डबलबाट पेनाल्टी पाउँदै युनाइटेडले तीन अंक बटुल्यो ।